यसरी भयो बालिकाको ब्रेन ट्युमरको सफल अप्रेशन – RealPati.com
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको न्यूरो भिवागको ओ.पी. डीमा अत्याधिक टाउको दुखिरहने र बान्ता हुने भएपछि १२ वर्षिया एक बालिका आइन् । आवश्यक जाँच र ब्रेनको एम आर आई गर्दा ब्रेन को बायाँ भाग मा ट्यूमर देखिएको थियो । बालिकाले करिव एकवर्ष अगाडी वीर अस्पतालमा सोही ठाउँको ट्यूमर एपेन्डाइडोमा अप्रेशन गरिएको थिायो । त्यस पश्चात रेडियोथेरापी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमै गरिएको थियो । उक्त ट्यूमर ठूलो हुँदै गएमा बिरामीको एक भागको हात खुट्टा नचल्ने हुन सक्ने, बोली बोल्न नस्कने हुन सक्ने भएकाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल का न्युरो अंकों सर्जन डा. राजीव शाहको नेतृत्वमा करिव ६ घण्टा लगाएर सफलता पूर्वक ब्रेन ट्यूमर को शल्यक्रिया गरियो ।
हाल बिरामीको अवस्था समान्य रहेको छ । उनि रोगबाट मुक्त भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टिमको भनाइ छ । डा.ह्रिदयेश प्रताप मल्ल, एनेस्थेसिया टिमका डा. आरोग्य र नर्सहरुको सहयोगबाट सफलता पूर्वक अप्रेशन गरिएको थियो ।
हाल अब ब्रेन ट्यूमर जस्तो जटिल किसिमको अप्रेसन भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सम्भव भएको र यसबाट बिरामीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । जसले गर्दा अब मानिएका यस्ता जटिल मानिएका सर्जरी पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमै सम्भव भएकाले बिदेसीनबाट लाखौ रूपैया जोगाउन सफल भएको अर्वुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रिय अध्यक्ष एवं भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले बताए ।
पूर्वेली गायक देवकुमार मगरको ‘एक जमानामा’ (भिडियोसहित)
लिपुलेकबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट
Freelance Create An Article Per Day To Boost Your Job